Vaovao - Lanxi Lvjian New Building Material Factory, mamokatra tsipika busa-tsara EPS tsara indrindra ho anao
Lanxi Lvjian New Building Materials Co., Ltd.dia orinasam-pamokarana entity feno manambatra ny famokarana, ny fikarohana ary ny fampandrosoana, ny varotra ary ny fametrahana. Miorina amin'ny fandevonan-kanina sy fampidirana ireo haitao mandroso vahiny, ny orinasa tsy miankina dia manadihady sy mamolavola singa mandoko rindrina maivana amin'ny rindrina EPS sy GPS. Ity vokatra ity dia manana tombony amin'ny fitehirizana ny hafanana, ny fitsitsiana angovo, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny kalitao avo lenta, ny fizarana maimaimpoana, ny fametrahana mora sy ny fametahana ary ny fametrahana mora.
Ny tsipika haingon-trano EPS dia misy polystyrene mahazaka afo demoulded B2 ho vatana lehibe, apetaka amin'ny lamba vita amin'ny fibre vera tsy mahazaka, ary atambatra amin'ny sosona miaro ivelany manokana. Tsy tratry ny fiovan'ny mari-pana, ny fanoherana ny hatsiaka sy ny hafanana ary tsy voakasiky ny toetr'andro mando sy ny orana asidra.
Ny tsipika haingon-trano EPS dia mety ho may afo ary tsy hamoaka akora misy poizina. Izy io dia vokatra ara-pitaovana haingon-trano avo lenta.
Ny tsipika haingon-trano EPS dia tapaka amin'ny fifehezana isa amin'ny solosaina, izay azo hamokarana haingana ary manana karazany maro, toy ny tsipika, tsanganana romana ary rakotra varavarankely. Ny siny sns ... dia azo apetraka amin'ny lafiny efatra amin'ny varavarankely, varavarana, zorony sy rindrina; ataovy tsara tarehy kokoa ny endrik'ilay trano, ary ento ny hevitra vaovao sy tsy manam-paharoa ho an'ny mpanao mari-trano.
Ny vokatra dia aondrana any UAE, Arabia Saodita, Espana ary firenena hafa. Niaiky ny fampiasan'ny mpampiasa azy ity ary nisaina fatratra. Ny namana amin'ny fari-piainana rehetra dia tongasoa hitsidika sy hitarika an'i Lanxi Lvjian New Building Materials Co., Ltd.
Ny fitaovana famokarana tsipika EPS miorina amin'ny arc dia mamaha ny fizotran'ny fanamboarana boky fampianarana nentim-paharazana. Ny milina fanapahana marindrano EPS dia ampiasaina hanodinana ny bobongolo misy ny tsipika miendrika tsipika miaraka amin'ny tariby fanoherana, ary avy eo noforonina ireo masontsivana miendrika arc. Ka azo tapahana amin'ny masinina. Aorian'ny fanapahana azy dia ampiasao ny «hanger» lakaoly afovoany hanaparitahana ny lakaoly ary hanodinana azy ho endrika. Ny tombony azon'io fomba io dia ny fitovian'ny lakaoly, ny haben'ny tsipika dia tena mahazatra, ary ny avo dia avo.
Faharoa, ny iray hafa dia manapaka varavarana miendrika wedge eo an-damosin'ny tsipika mahitsy vita amin'ny artifisialy, ary avy eo aforeto ho andohalambo. Mamonjy fitaovana ity dingana ity, saingy manana takiana teknika avo lenta ho an'ny mpiasa, taham-bokatra avo lenta ary vokatra kely. Ny tsipika fandravahana eps miendrika arc dia ampiasaina matetika amin'ny fananganana node toa ny varavarankely, tapakila arabo, varavarankely sns ... Na dia tsy dia avo loatra aza ny tahan'ny fampiasana dia hanatsara ny hatsaran'ny trano izany.
Eps Cornice koronosy tsipika, Eps fanaovana koronosy Cornice, Eps sombin-javatra Cornice endrika famolavolana milina, Masinina Cornice Cornice Eps, Eps Cornice Famolavolana tsipika famokarana, Masinina famolavolana endrika Eps Cornice,